मुख्य पृष्ठकन्टिर-दृष्टिभाइरल फोटोमा परपीडक बिम्ब
कहिलेकाहीँ कन्टिर–बाबूलाई लाग्ने गर्छ– नेपाली समाज साँच्चै ‘परपीडक’ छ । अर्काको आलोचना गर्न बढी मन पराउँछ, प्रशंसा गर्न भने जान्दैन । प्रायः अर्कालाई पीडा थप्न अग्रसर हुन्छ ।
कन्टिर–बाबूलाई कसले कुन राजनीतिक सिद्धान्त र विचार मान्छ भन्ने कुराको मतलब छैन । उनी जे देख्छन्, उनको ब्रह्मले जे भन्छ कन्टिर–बाबू त्यही बोल्छन्, त्यही लेख्छन् । बस, उनको आग्रह छ समाज परपीडक बन्नुभएन ।
प्रसङ्गवश कन्टिर–बाबू हालैको एउटा सन्दर्भलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छन् । अहिले नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ग्यवाली भारत भ्रमणमा जाँदा त्यहाँको रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसँगको फोटोलाई केहीले अतिरञ्जित ढङ्गले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाएर तथानाम टिप्पणी गरेका छन् । हो, त्यस्तो टिप्पणी कन्टिर–बाबूलाई अशोभनीय र परपीडक प्रवृत्तिको लागेको छ । एउटा श्रव्य–दृश्य सामग्रीबाट थोरै काटेर राजनाथका सामु प्रदीपले टाउको निहुराएको फोटो कोट गरी भाइरल बनाइएको छ ।
कन्टिर–बाबूका दृष्टिमा यो एक प्रकारको अपराध हो । अरे यार … प्रदीपले हात जोडेर टाउको निहुराएर अभिवादन गरे नै रे भने पनि त्यसमा उनले के गल्ती गरे । परपीडक हो ! विगतका यस्ता अन्य फोटा पनि खोजेर ल्याएर सञ्जालमा भाइरल बनाओ ! सबैका अनुहार उदाङ्गिनेछन् … ल ठोक्का !
तुलनात्मक रूपमा प्रदीप सभ्य र सुसंस्कृत मानिन्छन् । उनले नम्रतापूर्वक आफूलाई प्रस्तुत गरे, आम नेपालीको विनयशील भाव प्रदर्शित गरे । के यसो गर्नु गलत हो ?
हो, कूटनीतिक मर्यादा र सार्वभौम बराबरीलाई सबैले ध्यानमा राख्नुपर्छ, यसमा विवाद हुन सक्दैन । तर कूटनीतिमा थोरै भए पनि आफ्नो संस्कृतिको असल पक्ष मिसाउँदा के बिग्रिन्छ ? कन्टिर–बाबूले जेमा पनि जोरी खोज्ने कुरा र प्रवृत्तिको अर्थ बुझेका छैनन् । यस्तो प्रवृत्ति निश्चय पनि कूटनीति हुन सक्दैन ।
कूटनीति परपीडक भाइरल